Kutanga zuva rega rega nekutenda. - Anotungamira - Quotes Pedia
Tanga mazuva ese nekutenda. - Asingazivikanwe
Tanga zuva rega rega nekutenda uye izvo pakupedzisira zvinowedzera mweya wako kuti iwe ugone kutarisa pane rako basa.
Kazhinji kazhinji, tinoramba tichinyunyuta pamusoro pezvisingaiti zvakakomberedza isu, zvakanyanya, zvekuti hatitombove nemoyo murefu wekutarisa zvinhu zvakanaka zvakatikomberedza. Izvo zvakakosha kuti utange zuva rega rega uye rega rega nerutendo sezvo izvo zvichizokubatsira iwe kuita zvakanaka muhupenyu hwedu.
Iwe unofanirwa kutenda kune mumwe nemumwe uye munhu wese akapa kune yako hupenyu, uye uve mhando yemunhu anofara nguva dzese. Izvi zvinogona kuita kuti iwe uzadze nehukama, uye iwe uchave uine tarisiro yetariro yezvinhu zvakakukomberedza.
Ziva kuti vanhu vane negativities vanowanzo pedza hupenyu hwavo vachinyunyuta nezve zvinhu uye mamiriro ezvinhu, haufanire kunge uri mhando yemunhu anoita izvozvo! Iva iye anotanga zuva rega rega uye zuva rega rega nekutenda, uye kana ukadaro, iwe unozonzwa pfungwa yekugutsikana mukati mako.
Ziva kuti zuva rega rega muhupenyu hwako rinokupa iwe mukana wekuzviratidza. Iwe unofanirwa kugara wakanangisa uye kutsunga kuita kuti zvinhu zvishande mukuda kwako. Zvese zvaunoda kuti uve nekutenda mauri, uye rega tariro ipinde.
Iva nemoyo murefu uye utarise zvinhu zvakakukomberedza, uye iwe uchaona kuti zuva nezuva uye zuva rega rega riri kukuzarurira gadziriro iwe.
Ziva kuti zuva rega rega mukana wekuti uzviratidze zvakare zvakare. Usambofa wakarasikirwa nesarudzo, uye edza kupa zvaunogona, zvimwe zvinhu zvese zvichawira munzvimbo dzoga.
Izvo zvakakosha kuti utende nekuti izvo zvinokugonesa iwe kutarisa zvinhu zvakakukomberedza pane chinyorwa chakanaka. Edza kuongorora izvo zvaunogona kuwana, enda unosangana nevanhu vakatenderedza, uye iwe uchazoziva kuti ino nyika inzvimbo huru yekuti iwe utenderere, uye uvandudze wega wega zuva rega rega.
Tanga zuva rega rega pane chinyorwa chakanaka. Kana nezuro rako risina kushanda mukuda kwako, ita shuwa kuti hausi kushandisa yako iripo kusaita chinhu uye uchizvidemba. Izvo hazvichakuitira zvakanaka.
Iwe unofanirwa kuve wakagadzirira kutora zvinetswa nguva zhinji, uye uve nechokwadi chekuti zvese zvipingamupinyi zvinowedzera kune ako akawanda ezviitiko izvo zvingazoguma zvazokubatsira iwe kubudirira mukufamba kwenguva kwehupenyu hwako.
Kana iwe uchinge uchitenda kune vamwe, hauchengete chigumbu mumoyo mako uye izvi zvakare, zvinobatsira iwe kuita zvakanaka mumazuva ako anouya.
Tanga zuva rega rega nekutenda uye iwe uchaita zvakanaka muupenyu hwako. Iwe unozogona kukura uye iwe uchave unokwanisa kutora zvidzidzo kubva pane zvako zviitiko sezvo ivo vachiramba vachiwedzera kuwedzera kune yega neese mamiriro ezvinhu aunoramba uchisangana nawo pasi pemutsara.
Maitiro e Kuonga Quotes
Mazuva ese Quotes
Yese Yemangwanani Quotes
Mazuva ese Quotes Uye Kutaura
Kuonga Uye Kugutsikana Quotes
Kuonga Quotes Uye Kutaura
Kuonga Quotes Kune Vana
Kuonga Quotes Mifananidzo
Rudo Uye Kutenda Quotes
Muvhuro Morning Quotes
Pfupi Mazuva ese Quotes
Shandira pakuve murudo nemunhu mugirazi akapfuura nezvakawanda asi achakamira. - Asingazivikanwe
Shandira pakuve uri murudo newe pachako nekuti wanga uchipupurira hwakawoma moyo pamusoro pe…
Usambove musungwa wekare wako. Chaingove chidzidzo, kwete mutongo weupenyu hwese. - Asingazivikanwe
Ikoko hakugone kuve nekunzwisisa kwechokwadi kwezvazvino pasina ruzivo rwekare, uye nekudaro yedu…
Usanetseke nezvakakanganisa zvakapfuura nekuti hapana chaungaite kuti uchinje. Tarisa pane yako yazvino uye gadzira rako ramangwana nhasi. - Asingazivikanwe
Usanetseke pamusoro pekukanganisa kwekare nekuti hapana chaungaite kuti uchinje. Tarisa pane yako yazvino…
Rudo rwechokwadi rwakavakirwa pachibairo uye icho chibayiro chinowanzoreva kuisa zvinodiwa nevamwe pane zvako. - Asingazivikanwe
Rudo rwechokwadi rwakavakirwa pachibairo uye icho chibayiro chinowanzoreva kuisa zvinodiwa nevamwe pane zvako. -…